Uganda: Shabaab oo beegsanaya goobo waxbarasho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Booliska dalka Uganda ayaa sheegay in ay heleen macluumaad sheegaya in Al-Shabaab ay weerarro ku bartilmaameedsan rabto goobo waxbarasho oo ku yaalla dalkaas.
Taliyaha booliska Uganda, Kale Kayihura, ayaa sheegay in Uganda ay hadda ku jirto feejignaan sare, kadib markii la helay macluumaadkaas.
Kale Kayihura ayaa sheegay in ururka Al-shabaab uu doonayo weerarro uu ku bartilmaameedsado xarumo waxbarasho oo ku yaalla wadada isku xirta magaalooyinka Kampala iyo Jinja.
Weerarkaasi ayaa dhacay ka dib markii ay dowladda Britain, Kenya uga digtay weerarro uga iman karo Shabaab, balse madaxweynaha Kenya, Uhuru Kenyatta, ayaa si shaac baxsan ugu gacan sayray digiintaasi.